Walaaca Mareykanka ee calooshood u shaqeysteyaasha Mali ee uu Ruushku taageero oo kordhay
Mareykanka oo ay weheliyaan xulafadiisa caalamiga ah iyo kuwa ay wada shaqeynta leeyihiin ayaawaxaa ka go'an in ay ka caawiyaandalka Mali in la soo celiyo xukunkiidimoqraadiga ahaa. 16-kii bilood ee la soo dhaafay, dadka reer Mali waxaa lagu sameeyay afgambi, waa markii labaad oo ay militarigu la wareegaan xukunka, waxaana sii luminaya dhul badan oo ay la wareegayaan kooxaha xagjirka ah ee rabshadaha wata.
Hadda dawladda KMG ee Mali ayaa ka fiirsanaysa waxa loogu yeero "caawinta" ciidamada kooxda Wagner ee uu Ruushka taageero, heshiis la soo sheegay oo Mali ugukacaya 10 milyan oo doolar bishii. Bayaan qoraal ah oo uu soo saaray af-hayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in Maraykanku “uu ka walaacsan yahay” qorshahan, kaas oo “ leexinaya lacagaha loo isticmaali karo in lagu taageero ciidamada qalabka sida adeegyada bulshada.
Kooxda Wagner ayaa la rumeysan yahay in uu maalgeliyay oo uu maamulo ninka la yiraahdo Yevgeniy Prigozhin, oo xulafo la ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Prigozhin waxaa saaran cunaqabatayn ay saareen Maraykanka, Boqortooyada Ingiriiska, iyo Midowga Yurub. "Ciidamada Wagner," ayuu yiri Mr. Price, "kuwaasi oo caan ku ah dhaqdhaqaaqyadooda xasilooni-darrada ah iyo xad-gudubyada xuquuqda aadanaha, nabad kuma soo celin doonaan Mali, laakiin waxay sii kordhinayaan xasilloonidarrada dalka."
Dhaqaalaha dalka Mali, ayuu yiri, "waa inay ka faa'iideystaan dadka Mali oo aan lagu deynin ciidamo ajnabi ah oo aan lala xisaabtami karin iyada oo la diiwaan geliyo xadgudubka dadka maxalliga ah iyo in la wiiqo awoodda dawladaha martida loo yahay iyo lacagta dadka."
Bishii December 13keedii, Midowga Yurub ayaa cunaqabatayn ku soo rogay kooxda Wagner hurinta rabshadaha iyo ku lug lahaanshaha xad-gudubyada xuquuqda aadanaha ee Bariga Dhexe, Ukraine, iyo Afrika - tallaabadaas oo uu soo dhaweeyay Mareykanka. Sida Af-hayeenka Price uu xusay, "Wadamada ay tagto kooxda Wagner ee la geynayo xuduudahooda waxay isla markiiba la kulmaan fakhri, daciifnimo, iyo ammaan yari."
Waxa uu tilmaamay in martiqaadka Mali ee la sheegay inay u fidisay kooxda Wagner ay halis gelinayso tabarucaadka in ka badan 20,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah iyo ciidamo caalami ah, kuwaas oo wax kharash ah aanu ugu kacaynin dadka Mali iyo dawladdaba.
Xoghayaha Arimaha Dibada Antony Blinken ayaa ugu yeeray Mali inuu yahay dal "Fure u ah xasiloonida mustaqbalka ee Sahel," wuxuuna ku booriyay Mali inay ku soo noqoto xukunka dastuuriga ah iyo maamulka dimuqraadiga ah. Joogitaanka jilayaasha dibadda, sida kooxda Wagner, waxay kaliya dib u dhigi kartaa oo wiiqi kartaa natiijadaas.